Gị turnkey PCB na Assembly onye na China-Kingford
Tụkwasịrị obi PCB nzukọ ahụmahụ na ihe karịrị afọ 20.
Onye-nkwụsị ngwọta maka OEM, PCBA na turnkey Assembly
Ngwa ngwa Prototype PCB Assembly n'ime 7days
6 Usoro Yamaha SMT + 2 Usoro mgbakọ Thru-Hole
Ahụmahụ tụkwasịrị obi na ihe karịrị afọ 20.
High Mix, Low-Middle Volume PCB ruo 60 n'ígwé
Otutu oyi akwa, HDI, Microwave, Metal Core PCB
Asambodo Ogo na ISO 13485 na IATF 16949
AKWARKWỌ AKW .KWỌ
Database jikọtara ndị ahịa 1000+
100% mbụ ọhụrụ na traceable
Na-agbakwunye 5,000,000 + components
Nnyocha siri ike na-abata na njikwa mma
Usoro ọgụgụ isi maka 3D DFA / DFM Ngwọta
Nkeji 3 Chọpụta Okwu na PCBA tupu Production.
Inye Comprehensive 3D DFA / DFM Reports
Nkwado CAD / Gerber Data Source
Chepụta & wepụta akpaka ule jig / fixtures
"Nnyocha AOI, nyocha X-ray, nyocha ICT,
Nnwale FCT, nnwale na-ere ọkụ "
Ndekọ nnwale na nsonaazụ na-achọpụta
30 + PCB Nhazi Injinia
Max Layer Nke: 40, Max Signal Speed: 56G
Min ọdịiche nke BGA PIN: 0.3mm, Min L / S: 3 / 3mils
onye bu kingford
ShenZhen KINGFORD Technology CO., LIMITED bụ a elu-tech enterprise na PCBA nwere ọgụgụ isi n'ichepụta gbakwasara, na-enye PCB imewe, n'ichepụta, na mmiri ị nweta dị ka inyeaka ọrụ anyị gaje ahịa. Independent nnyocha na mmepe nke mbụ ụlọ ọrụ PCBA otu-pịa nwere ọgụgụ isi e kwuru usoro na ike ga-agwụ agwụ na 10 sekọnd PCB, BOM, nhazi ụgwọ, synchronously jikọrọ Intelligent osisi na ọkọnọ yinye, iji nweta ngwa ngwa ịtụ na 3 nkeji, na 1-2 izu nke nnyefe ọsọ ọsọ.
Experience Tụkwasịrị obi ahụmahụ na ihe karịrị afọ 20.
Nwee smart DFM usoro iji belata prototype ugboro na-amụba R&D arụmọrụ.
A-● Ọrụ nkwụsị, Nrụpụta PCB na Mgbakọ, Ngwakọta Sourcing, mmemme IC na ọrụ nnwale.
● Enweghị arịrịọ MOQ, Lekwasị anya na High Mix, Low na Medium olu.
● Inye awa iri abụọ na anọ na ntanetị.
Sample ọrụ bụ n'ime 7-arụ ọrụ ụbọchị!
● 2018 - Mmeghe nke Shenzhen PCBA & Turnkey na-arụpụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
● 2016 — Mmeghe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Hubei PCBA & Turnkey.
● 2012 — Na-agbasawanye azụmahịa ya na PCBA & Turnkey n'ichepụta.
● 2009 — Mmeghe nke Meizhou aluminum pcb fabrication factory.
2005 — Nweta asambodo IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001, UL ， IPC.
● 2004 — Mmeghe nke Kingford PCB factory- (Well-tech) na Huizhou.
● 1999 —’Edebere Kingford Technology.
Ogo bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa anyị.
Na-aga n'ihu na-emezi njikwa njikwa iji mee ka ndị ahịa nwee obi ike.
Jikwaa njikwa dịka ụkpụrụ IPC si hụ 100% ọnụego ruru eru nke mbupu.
900 ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015
UL (E352816) Member Otu IPC
Ọhụụ: Bebụ ezigbo enyi nke ndị ahịa ụwa. Iji nyefee ndị ahịa, ndị ọrụ na ndị nwe ụlọ ahịa kacha ọnụ ahịa.
Ozi: Iji nye elu-edu, adọ na-eju afọ ọrụ maka PCB n'ichepụta na nzukọ.
Kedu ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ
Kingford na-akwado ndị ahịa ma na-enye ha ngwọta zuru oke maka ndụ ndụ niile nke usoro eletrọniki na sistemụ. Anyị nwere ikike na nka niile dị mkpa iji nye ndị ahịa ndụmọdụ maka nsogbu njikwa teknụzụ, sitere na mmalite nke ngwaahịa a na-emepụta ngwaahịa ruo na njedebe nke ndụ nke ngwaahịa; na anyị na-eme ya na ndabere nke kasị mma ngụkọta na-eri nke nwe ụkpụrụ.
ka anyị si eme
Ihe ndị na-akpatakarị mkpọtụ na ịgbanwe ike ọkọnọ (2)
Gịnị bụ PCB Assembly mmepụta usoro
Nkịtị: Na PCB Assembly mmepụta usoro, a otutu producti ...
Kedu ihe bụ ihe agafe maka PCBA?
Nwepu: Ihe ndi ozo nwere ike zoo aka na komputa ...
Webata mmepe omume nke ụlọ ọrụ smt na nzukọ SMT PCB
Nkịtị: A na-akpọ nzukọ SMT PCB elu-elu ma ọ bụ elu ugwu ...
Kedu ụkpụrụ ekwesịrị ịgbaso maka bọọdụ pcb
Nkịtị: IBomi PCB bụ ọrụ na-agwụ ike. Ọ bụrụ na ị bụghị carefu ...
Gịnị bụ dị iche iche nhazi ọkwa nke PCB mbadamba?
Nkịtị: PCB osisi bụ isi ihe, nke mechara mejupụta ...
Tipsfọdụ aro iji melite ikpo ọkụ nke PCB maka ngosi ọkụ
Nkịtị: A na-ahụ LEDs n'ebe niile, yabụ kedụ usoro f ...
Kedu ụkpụrụ a ga-ahụ na nyocha ọrụ DFM?
1 | Nhazi Ihe oru ihe eji ahoputa ahoputara aghaghaagha ime ya ...
Ihe na-emetụta nyocha DFM na otu esi edozi ha.
Ebumnuche nke DFM bụ iji belata ọnụahịa nrụpụta na-enweghị nkwekọrịta ...
Gịnị bụ Design maka Manufacturing na PCB Assembly?
Okwu Mmalite i. Nzube maka Nlụpụta: Taa, nhazi ...
Ihe karịrị otu oge anyị nyere iwu ka e nwee nzukọ bọọdụ bọọdụ site na KINGFORD Installation nke smd na mikpuo. Oge ọ bụla anyị natara ezigbo bọọdụ mara mma. O nweghị alụmdi na nwunye. Obi dị anyị ụtọ na usoro a na-emezukarị n'oge. Ihe niile bịara n’oge, yabụ na etinyeghị oge ịkwụsị gị
Họrọ onye ọrụ ngo, anyị lekwasịrị anya na ahụmịhe na ọrụ aka nke onye ga-eme n'ọdịnihu. KINGFORD emezuola ihe anyị tụrụ anya ya n’ịhazi zụta ihe mejupụtara, imepụta na mgbakọ nke bọọdụ sekit ndị e biri ebi. Anyị na-atụ anya inwekwu ezi nkwado!